Park Hyatt Maldives Hadahaa: Yakasarudzika chitsuwa resort yakadzokororwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Park Hyatt Maldives Hadahaa: Yakasarudzika chitsuwa resort yakadzokororwa
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Park Hyatt Maldives Hadahaa muNorth Huvadhoo inzvimbo yakakura yechisikigo ine chena gungwa, azure lagoon uye 360 ​​° imba reef.
Park Hyatt Maldives Hadahaa iri muNorth Huvadhoo, imwe yemahombekombe akakura kwazvo epasirese, iine chena mahombekombe egungwa, azure lagoon uye 360 ​​° imba reef.
Green Globe munguva pfupi yapfuura yakadzokorora iyo Park Hyatt Maldives Hadahaa, ichisimbisa yavo Goridhe chinzvimbo.
Pravin Kumar, General Manager panzvimbo yekutandarira vakati, "Tsika yezvakatipoteredza pamwe neyakagadzikana inogara iri chikamu chakakosha chezviitiko zvezuva nezuva kubva pakutanga chaipo. "Kunyange tichipa vaenzi ruzivo rwakashongedzwa neshangu dzisina shangu, tinobvumawo kuti kuvapo kwedu kunosiya tsoka yaticharamba tichiedza kudzikisa kuitira kuchengetedza nekuchengetedza nzvimbo ino yatinoti musha."
Resource manejimendi yakakosha kufunga paPark Hyatt Maldives Hadaha. Mvura, magetsi uye kushandiswa kwemafuta kunoongororwa zuva nezuva. Kupisa kunogadzirwa kubva kumagetsi kunodziisa mvura inopisa kuti ishandiswe kutenderedza chivakwa pane kuvimba nemabhaira akajairwa. Izvi zvinoderedza mafuta uye simba rekushandisa zvakanyanya pamwe nemari inosanganisirwa. Mvura yemugungwa inoshandiswa kutonhodza dzimba dzekunze dzemhepo-kutonhodza dzichidzikisira mashandisirwo esimba apo mvura yekunaya inonaya uye grey remvura inodzokorodzwa inoendeswa kune yekugezesa chimbuzi masisitimu uye kudiridza.
Iyo nzvimbo yekutandarira inoenderera mberi nekutarisa kutsvaga zvigadzirwa kwanhasi uye kusvika parizvino, inoita bhizinesi pamwe neanosvika 70% yezvikafu zvinogadzirika uye vanonwa zvinwiwa. Eco-huni yakagadzirwa neyakareba yakatsindirwa yemishenjere inoshandiswa zvakare kudzora decking pane iyo imba.
Sechikamu chehurongwa hwayo hwekugadzirisa marara, mabhodhoro epurasitiki emamineral emvura akatsiviwa nemabhodhoro egirazi kune vese vashanyi uye vashandi nekudaro vachichengetedza mabhodhoro epurasitiki e120,000 gore rega. Chikafu chakazara mumabhokisi ebento ekushanya panzvimbo pemidziyo yepurasitiki. Mumakamuri ekugezera, zvinogadziriswazve zvedongo zvebhodhoro zvinowanika munzvimbo yemarara epurasitiki emota. Kubva 2015, mashanga epurasitiki akatsiviwa nemapepa acho.
Park Hyatt Maldives Hadahaa yakurudzira kuita pamwe munzvimbo yekurwisa kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Mukubatana nesangano repasi rose risiri purofiti, nzvimbo yekutandarira yakaronga dhoni yayo (yechinyakare magwa eMaldivian) kuunganidza mapurasitiki kubva kuzvitsuwa zviri kutora chikamu muNorth Huvadhoo - Dhandoo, Kondey, Nilandhoo neGemanafushi pavhiki mbiri. Mapurasitiki akaunganidzwa anobva atumirwa kuburikidza nedhipatimendi rekutengesera dhoni kuMurume nekuenderera mberi kunzvimbo yeguta repurasitiki.
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwakakosha kuhupenyu hwezuva nezuva panzvimbo ino yekudzokera. Muna 2016, iyo Dive uye Chiitiko Center - Bhuruu Rwendo, yakapihwa iyo PADI Green Star ™ nekuda kwekuyedza kwavo mune zvakasvibirira bhizinesi maitiro uye kutsigira zvine mutoro kuchengetedza. Mubairo wePADI Green Star ™ unocherekedza nzvimbo dzekushambira uye nzvimbo dzekutandarira dzakakumikidzwa kuona kugadzikana nekuchengetedza indasitiri yekudonha. Inozivisa mabhizinesi anonyatso chengetedza nekuchengetedza nharaunda kuburikidza nezvirongwa senge simba-rinofambisa nzira dzekufambisa, kushandiswa kwezvinhu zvakaomarara, hutungamiriri hwekuchengetedza, kuchengetedza mvura uye kushandisa simba zvine mutsigo.
Green timu yekuzvitsvakira yakazvipira inoitawo basa rakakosha mukuchengetedza mamiriro ekusimudzira. Coral reef yekutarisa inoitwa mwedzi wega wega kuti iongorore mamiriro ereef uye kupora, kunyanya mushure mekupisa zviitiko. Chikwata ichi zvakare chinoitisa pamwedzi dzimba reef, mahombekombe uye zvitsuwa zvakachena. Munguva yeRudzi rweMaldivian Fishing Trips inopihwa nenzvimbo yekutandarira, hove dzisingasviki hurefu hushoma kana mhando dzakachengetedzwa dzinoburitswa kuti dzive nechokwadi chekuti hove dzemasheya dzinozadzikiswa. Kuchengetedza nekusimbisa mvura yakachena nemakorari akapoterera chitsuwa, mitambo yemvura ine mota haina kubvumidzwa.
Sechikamu chechirongwa chayo cheCSR, gore rega rega nzvimbo yekutandarira inomhanyisa iyo Global Mwedzi weService, chirongwa chegore chega chekuti nzvimbo yekutandarira inogona kusvika nekusangana nenharaunda. Mabasa anoitirwa kutsigira imwe yeiyo Hyatt Inobudirira mbiru: Sustainability Yezvemamiriro ekunze, Kuvandudza kwehupfumi & Investment, Dzidzo & Kufambira Mberi kweMunhu uye Hutano & Hutano.
Hurukuro nemusangano zvakarongerwa vadzidzi kuti vawedzere kuziva nezve kukosha uye kukosha kwekudzivirira matombo emakorari uye gungwa. Chikwata cheHyatt Thrive chiri kushanda nesangano remuno rakatangisa chirongwa chemawere kudzidzisa vana veko zvikoro zvemunharaunda nezve coral reef ecosystems aripo pamusuwo pavo.
VaKumar vakawedzera, “Sekushanya iri indasitiri huru yekuwana mari, itarisiro yedu kukudziridza kufarira uye rudo rwekugamuchira vaeni pakati pevana vechikoro. Kaviri pagore, tinokoka zvikoro zviri pakati pezvina kusvika zvitanhatu zvakavakidzana kuti zvishanyire nzvimbo iyi. Vana vanozoziviswa kuHyatt kana vari pachitsuwa, uye nezvatinomirira semucherechedzo uye senzvimbo yekutandarira muno muMaldives. ”
Green Globe ndiyo yepasi rose yekusimudzira sisitimu yakavakirwa pamatanho anotambirwa epasi rese ekuchengetedza mashandiro uye manejimendi emabhizimusi ekushanya nekushanya. Ichishanda pasi pe rezinesi repasirese, Green Globe iri muCalifornia, USA uye inomiririrwa munyika dzinopfuura makumi masere nematatu. Green Globe inhengo yakabatana yeUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Kuti uwane ruzivo, ndapota tinya pano.